Guddomiyaha Guddiga Ganacsiga ee Golaha Shacabka oo sheegay in COVID-19 uu saameyn xooggan ku yeeshay Ganacsiga – Kalfadhi
Guddomiyaha Guddiga Ganacsiga ee Golaha Shacabka oo sheegay in COVID-19 uu saameyn xooggan ku yeeshay Ganacsiga
November 8, 2020 Hassan Istiila
Guddomiyaha Guddiga Ganacsiga ee Golaha Shacabka Maxamuud C/raxmaan Beenebeene, ayaa Golaha Shacabka ka jeediyay warbixin ku saabsan saameynta xanuunka COVID-19, uu ku yeeshay Ganacsiga dalka Soomaaliya.
Ajendaha kulanka ayaa ahaa dhagaysiga warbixin ku saabsan saameynta uu cudurka Covid-19 ku yeeshay xaaladaha cunto soo saarka iyo nafaqada dalka, iyo sidoo kale dhagaysiga warbixin ku saaabsan saameynta Covid 19 uu ku yeeshay ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka.
Guddomiyaha Guddiga, ayaa sheegay in cudurka uu si weyn u saameeyay daqliga dalka, wax soo saarka, xawaaladaha iyo dhinac kasta oo kamid ah Ganacsiga.
Guddiga waxaa uu sannadkan dhageysi dad-weyne uu ku qabtay magaalada Mogadishu, waxaana kasoo qeyb-galay ganacsatada Soomaaliyeed ururada bulshada rayidka, waxaana kulankaasi ujeedkiisa uu ahaa sidii loo oggaan lahaa sida COVID-19 uu saameyn ugu geystay dhaqaallaha iyo Ganacsiga, ayuu yiri Guddomiyaha Guddiga Ganacsiga Golaha Shacabka Maxamuud C/raxmaan Beenebeene.
Madasha xisbiyada Qaran oo ka soo hor-jeesatay Guddiyada Doorashada, baaqna kasoo saartay Xildhibaannada Somaliland
Xildhibaannada Baarlamaanka Puntland oo oggolaaday in dib loo dhigo ka doodista xeerka Isgaarsiinta